Editor - xyznews.co - Page 2
နေ့လယ်ခင်းတဖြတ် အားကစား သတင်းများ
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကနေ ထွက်ခွာဖို့ ဆန္ဒရှိ နေတဲ့ တိုက်စစ်မှူးကြီး ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို ဟာ ဒီကနေ့ သတင်းပို့ဖို့ စီစဉ် သတ်မှတ် ထားတဲ့ အသင်းရဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း အစီအစဉ်ကို ရောက်မလာခဲ့ ပါဘူး ။ ရိုနယ်ဒို ဟာ မိသားစု ကိစ္စလို့ အကြောင်းပြပြီး လေ့ကျင့်ရေးကွင်းကို ရောက်မလာခဲ့တာ ဖြစ်ကာ အသင်းဘက် …
ဂျေးဇုရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ကို ဒီကနေ့မှာ တရားဝင် ကြေညာသွားဖွယ် ရှိနေတဲ့ အာဆင်နယ် အသင်း
ဒီနေ့ ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့ဟာ အာဆင်နယ် ပရိသတ်တွေ ရက်အတန်ကြာ စောင့်ဆိုင်း နေခဲ့ရတဲ့ နေ့ရက်တစ်ရက် ဖြစ်လာဖွယ် ရှိနေပါတယ် ။ အာဆင်နယ် အသင်းဟာ ဂါဘရီယဲလ် ဂျေးဇု ကို ခေါ်ယူ နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဒီကနေ့မှာ ကြေညာ သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သတင်းထွက် လာခဲ့ပါတယ် ။ အာဆင်နယ် အသင်း …
ရာသီ အကြို ပြင်ဆင်မှုတွေကို ဒီကနေ့မှာ စတင်လုပ်ဆောင်မယ့် လီဗာပူး
လီဗာပူး ဟာ ရာသီ အကြိုပြင်ဆင်မှုတွေ ကို ဒီကနေ့မှာပဲ AXA လေ့ကျင့်ရေး စင်တာမှာ စတင် လုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ကနဦး အနေနဲ့ ကစားသမားပေါင်း 19 ယောက်ပဲ ရောက်ရှိလာမှာ ဖြစ်ပြီး ၊ နိုင်ငံ့ လက်ရွေးစင် အသင်းတွေမှာ ဆက်ပြီး ကစားပေးခဲ့ရတဲ့ စီနီယာ ကစားသမား 11 ယောက် …
လီဗာပူးမှာ အောက်စလိတ်ချိန်ဘာလိန်ရဲ့ အနာဂတ် နဲ့ ဂျိုးဂိုးမက် နာဘီကီတာ တို့ရဲ့ စာချုပ်သစ် အခြေအနေများ
မိုဟာမက်ဆာလားရဲ့ အနာဂတ်နဲ့ ပက်သက်တဲ့ သတင်းတွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက တစ်ပတ် ပေါင် ၃ သိန်းခွဲတန် ၃ နှစ် စာချုပ်သစ်ကို ချုပ်ဆိုခဲ့ခြင်းနဲ့ အတူ အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လီဗာပူးရဲ့ တိုက်စစ်ပိုင်းဟာ မာနေး ထွက်သွားခဲ့ပေမယ့်လည်း ဒါ၀င်နူးနက် ဆာလား ဂျိုတာ ဖာမီနို လူး၀စ်ဒီယက် တို့နဲ့ အတူ အကောင်းဆုံး …
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နည်းပြကြီး အဲရစ် တန်ဟတ် ဟာ အသင်းဟောင်း အိုင်ယက်စ် က ဘရာဇီး တောင်ပံ ကစားသမား အန်တိုနီ ကို ခေါ်ယူဖို့ ဆန္ဒ ရှိနေပေမယ့် ယူနိုက်တက် ကတော့ အန်တိုနီ အတွက် သတ်မှတ် ထားတဲ့ ပေါင် သန်း ၇၀ ဟာ များပြားလှတယ်လို့ မှတ်ယူပြီး ခေါ်ယူဖို့ …
ယူနိုက်တက် ကို ရောက်လာတော့မယ့် မာလာစီယာ ၊ ဘာဆာလို စပွန်ဆာရှာမယ့် အက်သလက်တီကို ၊ ပိုပြီး အရှိန်တက်လာတဲ့ အပြောင်းအရွှေ့တွေနဲ့ . . . ယနေ့အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
July 3, 2022 - by Editor
အိုင်ယက်စ် ကနေ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကို ပြောင်းရွှေ့ လာတော့မယ့် တိုင်ရယ် မာလာစီယာ ဟာ ဒီကနေ့ မှာ အင်္ဂလန် ကို ရောက်ရှိ လာပြီး ပထမအဆင့် ဆေးစစ်မှု ပြုလုပ် သွားမယ်လို့ ဖာဘရီဇီယို ရိုမာနို က ဖော်ပြ သွားခဲ့ ပါတယ် ။ မနက်ဖြန် မှာတော့ ဆေးစစ်မှု …
မက်ဆီဟာ ရော်နယ်ဒိုထက် ဘာကြောင့် ပိုကောင်းလွန်းရတာလဲဆိုတာ ရှင်းပြလိုက်တဲ့ ဇာဗီ
လီယွန်နယ် မက်ဆီ နဲ့ ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်ဒို ဆိုတာ မျက်မှောက်ခေတ် ဘောလုံး အားကစား လောကမှာ 15 နှစ်လောက်အထိ အကောင်းဆုံး ခြေစွမ်း‌ေတွကို ပြသရင်းနဲ့ စံချိန်တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ရိုက်ချိုးခဲ့ကြသူတွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့်လည်း သူတို့ နှစ်ဦးဟာ လက်ရှိ ဘောလုံး မျိိုးဆက်တွေထဲ အကောင်းဆုံး ကစားသမား2ဦး …
သူ့ အဖေက ဒါဝင် နူညက်ဖန် လို့ ဖွင့်ဟ လာတဲ့ လီဗာပူး ကစားသမားသစ် ကာဗယ်ဟို ရဲ့ အင်တာဗျူး
မေး – ဖေဘီယို ရေ…. Congratulations ပါ။ နောက်ဆုံးတော့ တကယ် ဖြစ်လာခဲ့ပြီနော် ၊ လီဗာပူး ကစားသမားသစ် ဖြစ်လာပြီ ဆိုတော့ ဘယ်လိုတွေ ခံစားနေရလဲ? ဖြေ – ပြောစရာ စကားလုံးတောင် မရှိတော့ပါဘူး။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးကျယ်ဆုံး ကလပ်တွေထဲက တစ်သင်းကို ရောက်လာတဲ့ အတွက် အံ့အားသင့်စရာ ကောင်းလွန်းနေတယ်ဗျာ။ …
တန်ဟတ် လက်အောက်မှာ တိုးတက် ပြောင်းလဲလာခဲ့တဲ့ အချက် ၂ ခုကို ထုတ်ပြောလိုက်တဲ့ ရပ်ရှ်ဖို့
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပါတ်ကပဲ နည်းပြသစ် အဲရစ် တန်ဟတ်ရဲ့ လက်အောက်မှာ လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဥ် စတင်ခဲ့ပြီး ကစားသမား အများစု ပူးပေါင်းနိုင်ခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒါဟာ ကစားသမားတွေ နဲ့ တန်ဟတ် နဲ့ ပထမဆုံး အကြိမ် အလုပ် လက်တွဲလုပ်ခြင်း ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် ။ အဲရစ် တန်ဟတ် …
ရော်နယ်ဒို ထွက်ခွင့်တောင်းတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ တွစ်တာပေါ်မှာ အခြေအတင်ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ ကာရေဂါ နဲ့ နဗီးလ်
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူး ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်ဒိုဟာ အသင်းမှ ထွက်ခွာခွင့်ပေးဖို့အတွက်် တောင်းဆိုထားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းထွက်ခဲ့တဲ့နောက် ယူနိုက်တက် ဂန္တဝင် နဗီးလ် နဲ့ လီဗာပူး ဂန္တဝင် ကာရေဂါတို့ တွစ်တာ အထက်မှာ အခြေအတင် ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ် ။ ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်ဒိုဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နွေတုန်းက မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဆီ ပြန်ပြောင်းလာခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး …